Iindaba-Yithi HAYI kuManzi aSebhotileni nakwiMicroplastics
Ngomgqibelo weli 18thNgoSeptemba, iphulo lehlabathi liza kuza kwakhona: Usuku lokuCoca oluhlelwe nguCoca iHlabathi. Njengoko uMama weNdalo enesakhono esilinganiselweyo sokucoca ngokwakho, le nkqubo ijolise ekunikeni igalelo kwiplanethi ngeendlela ezahlukeneyo zemo engqongileyo. Umbono kukukhuthaza amawaka ezigidi zabantu ukuba asonge imikhono kwaye babhalise nawaphi na amanyathelo aqinisekileyo abanokuwathatha. Nokuba isenzo esincinci sinokwenza umahluko omkhulu!
Iziganeko zokucoca zibanjwa phantse kuwo onke amazwe. Eyona njongo iphambili kukulwa inkunkuma eqinileyo kunye nengxaki yenkunkuma elwandle. Inkunkuma yaselwandle ichaphazela umbono wolwandle kunye nempilo yendalo yaselwandle, ethi yona ibe nefuthe kuqoqosho lwaselwandle. Inkunkuma yolwandle enjalo inokuhlanjwa elunxwemeni ngohlobo lwamaza enkunkuma. Ke ngoko, inkunkuma ithathwa elunxwemeni lolwandle iphakathi kwazo zonke iintlobo zeziganeko zokucoca ezibalulekileyo.
(Imvelaphi yomfanekiso: kwelizwe.nl)
(Imvelaphi yomfanekiso: unsplash.com)
Amanzi asebhotileni naphina! Uninzi lwenkunkuma elunxwemeni ngamanzi eebhotile. Umhlaba uchitha ngaphezulu kwe- $ 100 yezigidigidi kumanzi asebhotileni minyaka le. Njengoko ingenakuphinda yenzeke kwakhona, indleko yokwenyani kubomi baselwandle kunye nendalo iya ngaphaya kwengcinga yethu. Abaphandi bakhathazekile malunga nesoyikiso esikhulu se-microplastics kwimpilo yabantu njengoko izifundo zibonisile ukuba amanzi asebhotileni ane-microplastics. Ukusetyenziswa kwamanzi asebhotileni kuthetha ukungeniswa okukhulu kwemicroplastics.
(Imvelaphi yomfanekiso: statista.com)
Njengoko i-infographic ye-statista.com ibonisa, owona mthombo mkhulu we-microplastics engena kwimizimba yethu ngamanzi eebhotile. Nangona kunjalo ukusela amanzi etephini ngekhe kubengcono… Impendulo? Icebo lokucoca amanzi okusela! Ukuguqula iteknoloji yokucoca i-osmosis isisombululo esihle sokukhusela i-microplastics emanzini akho njengoko isusa yonke into de kungabikho nto iseleyo ngaphandle kwe-H2O.
Yintoni i-reverse osmosis?
Xa izisombululo ezibini zoxinaniso lwetyuwa ezahluliweyo ngenwebu engenakugqobeka, ngendlela yendalo, amanzi aya kuphuma kwisisombululo secala elisezantsi elixineneyo ukuya kwelona cala liphezulu lokufuna ukulingana, kude kube kugxilwe kumacala omabini endoda. kulingana.
Le nkqubo ayizukufuna ukuba kwenzeke nawaphi na amandla. Kwaye ukuba senza ngokuchasene noko besisandula ukukuchaza, kufuna amandla. Kuya kufuneka unikezele ngoxinzelelo ngakumbi kwicala eligxile ekuoyiseni utyekelo lwendalo kwaye utyhalele ukuhamba kwamanzi kudlule kwipali encinci yenwebu kwaye ufumane ukuhamba kwamanzi amsulwa. Itekhnoloji esetyenzisiweyo kule nkqubo ibizwa ngokuba unyango lwe-reverse osmosis.
I-RO yenye yezona ndlela zisebenzayo zokususa ukungcola emanzini kunye nokuphucula umgangatho wamanzi. Yiya kuluhlu lwethu lwemveliso ukuze ufumaneImveliso entsha ye-RO okanye ezinye izisombululo zonyango lwamanzi okusela Itekhnoloji ye-RO ukwenza umahluko. Namhlanje siphila kwihlabathi elidityanisiweyo kunanini na ngaphambili, kwaye umntu ngamnye kufuneka abeke umzekelo kwabanye ukuba balandele. Yithi hayi kumanzi asebhotileni. Yithi hayi kwiiplastiki. Uya kunceda ukuphelisa ungcoliseko lwamanzi, iingxaki zolwandle, kunye notshintsho lwemozulu!
Ukutshintshwa kweFilitha yeCartridge yaManzi, Cofa inkqubo yokuCoca amanzi, Hluza iCartridge, Umcoci wamanzi waManzi aKhuni, Eyona Ndlela yokuBuyisa iOsmosis, Indlu yonke yokuCoca uManzi,